Xisbiyada UCID iyo Wadani oo hanjabaad u jeediyey Axmed Siilaanyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 12 September 2014 13 September 2014
Mareeg.com: Labada Xisbi ee mucaaridka ah ee Somaliland eek ala ah: Waddani iyo UCID ayaa ku dhawaaqay inay go’aansadeen in si midaysan ay u qaaddacaan diiwaangelinta madaniga ah ee todobaadkan maamulka Somaliland shaaciyay inay ka bilaabaneyso dhammaan deegaanada Somaliland.
Warsaxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen labadaasi xisbi ee mucaaridka ah ayaa waxay tilmaameen diiwaangelinta madaniga ah inay tahay kaar uu maamulka dhexe ku carqaladeynayo waqtiga diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada, si muddo kordhin loogu sameeyo maamulka.
Wuxuuna intaa ku daray in qorshihii diiwaangelinta madaniga ahi sidiisii u soconaya. Wasiirku wuxuu sheegay inay xukuumadu diyaarisay kharashkii dhinaceeda ee doorashada iyo shuruucdii oo haatan horyaalla baarllamaanka.
Soomaaliland ayaa dooneysa inay u jarto dadka halkaasi ku nool kaarar aqoonsi, ayna ku codeyn karaan, waxaase UCID iyo Wadani ka shaki qabaan in dano kale laga leeyahay.
Xisbiyada UCID iyo Wadani ayaa ka shaki qaba in madaxweynaha maamulkaas ee xilligaan Axmed Siilaanyo uu doonayo inuu waqtiga kororsado.
Dalalka Carabta oo dhaqaale cusub u ballan qaaday Soomaaliya